Firenena afrikanina voalohany any Namibia notsidihan'ny UNWTO hatramin'ny nanombohan'ny aretin'ny COVID-19
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia Namibia » Firenena afrikanina voalohany any Namibia notsidihan'ny UNWTO hatramin'ny nanombohan'ny aretin'ny COVID-19
Ny sekretera jeneralin'ny fikambanana fizahan-tany manerantany (UNWTO) dia nanao fitsidihana voalohany tany amin'ny fanjakana mpikambana afrikana hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana COVID-19. Ny fitsidihana ofisialy naharitra telo andro tany Namibia dia manamafy ny fanoloran-tenan'ny UNWTO ho an'ny kaontinanta ary nanasongadina andiana dinika avo lenta natao hanamafisana ny fiaraha-miasa misy ary hibanjina ny ho avy maharitra sy maharitra.
Amin'ny maha masoivohom-pirenena misahana ny fizahan-tany an'ny Firenena Mikambana azy, UNWTO dia nitari-dàlana tamim-pahavitrihana ny fanarenana io sehatra io ary manomboka amin'ity krizy tsy mbola nisy toa azy ity. Mba hanehoana ireo fanamby vaovao dia niara-niasa tamin'ny fanjakana mpikambana afrikanina izy, anisan'izany i Namibia, mba hampifanaraka ny fandaharam-pianarana 2030 ho an'i Afrika: fizahan-tany ho an'ny fitomboana, ny tondrozotra manan-tantara ho an'ny fitomboan'ny fizahantany manana andraikitra manerana ny kaontinanta. Ity fitsidihana ofisialy ity dia nanolotra vintana voalohany hanaraha-maso ireo fivoriana virtoaly ary hampandroso ny fanomanana ny famerenana amin'ny laoniny ny sehatra iankinan'ny fivelomana afrikana an-tapitrisany.
Ny sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili dia nihaona tamin'ny Andriamatoa Dr. Hage G. Geingob, filohan'ny Repoblikan'i Namibia ho an'ny fifampiresahana momba ny fahafahan'ny fizahan-tany hitondra fampandrosoana maharitra, ao anatin'izany ny tanora, ny vehivavy ary ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra. Ankoatr'izay, ny sekretera jeneraly dia nidera ny filoham-pirenena tamin'ny fitarihany, indrindra ny momba ny fandraisana andraikitra fifohazana amin'ny fizahantany iraisam-pirenena izay ahitana ireo kaody fiarovana lehibe momba ny fahasalamana sy fiarovana namboarin'i UNWTO. Ankoatr'izay, ny fihaonana tamin'ny filoha lefitra HE Nangolo Mbumba dia namela ny mpitarika UNWTO hanana fotoana bebe kokoa hanehoana ny fanohanany ireo firenena mpikambana ao Afrika rehefa mampiasa fizahan-tany izy ireo mba hivoarana sy hitombo. Ankoatr'izay, nihaona tamin'ny Honorable Pohamba Shifeta, solombavambahoaka, minisitry ny tontolo iainana, ala sy ny fizahan-tany ny delegasiona UNWTO hamantatra ny fomba hampitomboana ny sehatry ny fizahan-tany ao amin'ny firenena, ao anatin'izany ny fifantohana bebe kokoa amin'ny fizahan-tany momba ny gastrolojia, fizahan-tany ambanivohitra sy fiarahamonina.
'UNWTO natolotra tany Afrika'
"UNWTO dia manolo-tena hiara-miasa akaiky amin'ireo firenena mpikambana ao Afrika mba hahatsapa ny mety hisian'ny fizahan-tany hanampy ireo fiaraha-monina sitrana amin'ny valan'aretina ary hankafy ny fitomboana maharitra", hoy ny sekretera jeneraly Pololikashvili. "Ny fandaharam-potoanan'ny UNWTO ho an'i Afrika dia manao sarintany ny lalan'ny fiaraha-mientantsika rehetra, ary faly aho nahita ny fanoloran-tena nasehon'ny Governemanta Namibia hanohana ny fizahan-tany amin'izao fotoan-dehibe izao ary handray an'io sehatra io ho mpamily fiovana tsara ho an'ny rehetra."
Manasongadina ny fahavononan'ny UNWTO hitondra ohatra, ny fampisehoana dia azo antoka ary mavitrika amin'ny tany raha mety ny toe-draharaha, nitsidika toerana fizahan-tany maro an'isa any Namibia ny solontena. Anisan'izany ny Ranib Sand Sea, toerana iray an'ny UNESCO World Heritage Site izay vonona handray tsara ny mpizahatany indray, ary koa Swakopmund manan-tantara ary ny toeran'ireo mpizahatany Walvis Bay. Ny sekretera jeneraly Pololikashvili dia nihaona tamin'i Honorable Neville Andre, governoran'ny Faritra Erongo any Namibia, mba hanolotra ny fanampiana matanjaka an'ny UNWTO amin'ny fizahan-tany eo an-toerana, ao anatin'izany ny orinasa.
Ho fanampin'izany, ny Expo momba ny fizahantany Namibia dia nanolotra fotoana iray hifandraisan'ny UNWTO amin'ireo mpitondra sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana sy tsy miankina manerana ny faritra ary nandefa hafatra mazava ho an'izao tontolo izao fa Namibia, "The Land of the Brave" dia misokatra ary vonona handray ireo mpizahatany indray.
Manampy ny sidina Orlando sy Tampa ny American Airlines
Ny fiakaran'ny vidin'ny fangatahana fahasalamana amin'ny alàlan'ny tsimok'aretina tsimokaretina tsimokaretina simika